» “शासन,लाई मजाक बनाउँ,दै मनाङे:- पीएलाई कार्यवाहक मन्त्री” “शासन,लाई मजाक बनाउँ,दै मनाङे:- पीएलाई कार्यवाहक मन्त्री” – हाम्रो खबर
“शासन,लाई मजाक बनाउँ,दै मनाङे:- पीएलाई कार्यवाहक मन्त्री”
हाम्रोखबर संवाददाता 169 Views
“गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले मनाङका युवाको किस्सा सुनाए । भएछ के भने, जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल बनाउन बजेट छुट्याइदिन माग गर्दै मनाङका युवाहरू मन्त्री भेट्न पोखरा आएछन् ।”
“मन्त्रीले उल्टै हप्काएछन्, ‘मनाङजस्तो ठाउँमा केको खेलकुद ? तिमीहरूले जानेको भनेकै तास खेल्न हो । तास खेल्नलाई कभर्डहल चाहिँदैन । २० बाई २० (फिट) को कोठा बनाए हुन्छ ।’
“त्यतिन्जेलसम्म अरू मन्त्रीले, सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्दा उनले बुझाएका थिएनन् । सम्पत्ति विवरणबारे प्र,श्न गर्दा उनले भनेका, थिए, ‘मसँग कति सम्पत्ति छ मलाई नै ,थाहा छैन । धेरै पैसा सापटी दिएको छु, जुन मसँग आएको छैन । आउनेवाला छ भनेर कसरी लेख्ने ?’ उनका यस्तै अभिव्यक्तिले कतिपयले उनलाई ‘स्पष्टवक्ता’ भन्दै आएका छन् भने धेरैले ‘कमजोर’ ।”
‘गुन्डा नाइके’ बाट प्रदेश सांसद, हुँदै मन्त्री बन्दासम्म गरेका गतिविधिले उनी विवादमुक्त हुन सकेनन् । सांसदका रूपमा हाजिर भएको केही समयमै कास्की जिल्ला फुटबल संघका, अध्यक्षलाई झापड हानेपछि उनलाई प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा, राखेको थियो । पटकपटक उनले दिएका अभिव्यक्ति पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । मन्त्रीका रूपमा, गरेका पछिल्ला गतिविधिबाट उनले मन्त्री पद,लाई नै मजाक बनाएको, टिप्पणी हुन थालेको छ ।”
“सहयोगी,लाई कार्यवाहक, मन्त्री”
“मन्त्री गुरुङ तिहारअघि मनाङ गए । यता उनका सहयोगी रोनित गुरुङ मन्त्रीको कार्यकक्षमा छुट्टै टेबल राखेर विराजमान भए । टेबलमा नेमप्लेट राखियो, ‘रोनित गुरुङ, कार्यवाहक एवं प्रवक्ता’ । मन्त्रीको कार्यकक्ष पुग्ने जोकोही पनि उक्त दृश्य देखेर अचम्मित हुन्थे । कानुनमा कहीं, कतै उल्लेख नभएको मन्त्रीको कार्यवाहकको पदमा सहयोगी विराजमान भएको देखेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत अचम्ममा परे । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मन्त्रीले पाउने भनेको एक जना शाखा अधिकृत, एक नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव र एक कार्यालय सहयोगी मात्रै हो ।”
“रोनितले भने मन्त्री गुरुङले हिँड्ने बेलामा मन्त्रालयको काम सम्हाल्न र मन्त्रीका तर्फबाट बोल्न कार्यवाहक र प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको बताउने गरेका छन् । त्यसबापत कुनै सरकारी सुविधा वा पारिश्रमिक नलिएको उनले बताए। त्यसो त मन्त्री गुरुङ सांसद भएदेखि नै रोनित उनीसँगै छन् ।”
“अहिले पनि उनले स्वकीय सचिवका रूपमा सघाउँदै आएका छन् । अधिकृतस्तरकोप्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा युनिका गुरुङ र नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिवका रूपमा दिक्छेन डोल्मा लामाले पारिश्रमिक रसुविधा बुझ्छन् ।”
“बिहीबार मन्त्री गुरुङ फर्किएर मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सहयोगी रोनितले कार्यवाहकको नेमप्लेट राखे पनि मन्त्रीको अनुपस्थितिमा कुनै फाइल सदरबदर गरेनन् । ‘कार्यकक्षकुरेर बस्न चाहेको जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीलाई भेट्न आउनेजानेसँग सम्पर्कमा रहने काम गर्नुभयो ।’ मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले नेमप्लेटबारे थाहा पाएपछि हटाउन लगाएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले लिखित रूपमा कुनै कार्यवाहक दिनुभएको होइन, दिन मिल्ने कुरा पनि होइन,’ उनले भने, ‘उहाँलाई पनि यसबारे ज्ञान नहुन सक्छ ।”
“मन्त्री गुरुङ प्रायःजसो औपचारिक पोसाकमा मन्त्रालय पुग्दैनन् । उनी धेरैजसो ट्र्याकसुटलगायत ‘स्पोर्ट्स वेयर’ मा मन्त्रालय जान्छन् । कहिलेकाहीं गन्जीमै पुग्ने गरेको एक कर्मचारीले बताए । ‘यसो गर्नु हुँदैन भनेर उहाँलाई भन्ने मान्छे कोही छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्झाउनुपर्ने हो ।’ फाट्टफुट्टबाहेक औपचारिक कार्यक्रममा समेत उनी ट्र्याकसुटमा पुग्ने गर्छन् । लवाइखवाइभन्दा काम गरेर देखाउनुपर्ने बारम्बार दोहोर्‍याउँछन् । दौरासुरुवाल लगाउनेले देश बिगारेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी भने गन्जीमै मन्त्रालय आउनु नमिल्दो हुने बताउँछन् ।
“सम्पत्ति विवरण : उल्टै दुई करोड ऋण”
“अघिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा आफूले थुप्रै सापटी दिएको र उठ्न बाँकी रहेको बताएका मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति विवरण बुझाउने बेला भने ‘यु–टर्न’ लिए । उनले उल्टो दुई करोड रुपैयाँ ऋण देखाए । मन्त्री भएको ३ महिनापछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उनले आफूसँग २२ तोला सुन, ४५ तोला चाँदी, ८३ तोलाको मुगाको माला रहेको उल्लेख गरे । संघर्ष गाईभैंसी प्रालिमार्फत पशुपालन गरेको र फार्ममा २० भैंसी, पाँचवटा गाई आफ्नो नाममा रहेको उनले खुलाए । आफ्नो केही संयुक्त जग्गा रहेको उल्लेख गर्दै दुई करोड रुपैयाँ ऋण रहेको विवरण उनले कात्तिक १६ मा सार्वजनिक गरेका थिए ।”
“सांसद बन्नुअघि गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । २ करोड ९० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी थुनामा गएका थिए । यद्यपि, उक्त मुद्दामा उनले सफाइ पाए ।”
“पहिला श्रीमती थुनाए,पछि स्वकीय बनाए”
गत मंसिर १० मा हेटौंडा हिँडेकी मन्त्री गुरुङकी श्रीमती दिक्छेन डोल्मा लामालाई हेटौंडा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।
“उनको साथबाट मूर्ति र केही चाँदीका अम्खोरा बरामद भएका थिए । उनी ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पुस ४ मा रिहा भइन् । दिक्छेनका आफन्तले भने मनाङेले नै उनको झोलामा मूर्ति राखेको र हेटौंडा प्रहरीलाई सुराकी लगाएर पक्राउ गराएको बताएका थिए । अहिले भने उनै दिक्छेनलाई मनाङेले नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा नियुक्त गरेका छन् ।
“स्वतन्त्र, नेकपा, फेरि स्वतन्त्र : अब कता ?
“कांग्रेसबाट राप्रपा प्रवेश गरेका मनाङेले प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङबाट एमालेको सहयोगमा प्रदेश क्षेत्र २ बाट स्वतन्त्र सांसदका रूपमा प्रत्यक्ष चुनाव जिते । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सफाइ पाएपछि उनी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा संसद् प्रवेश गरे । २०७५ मा नेकपा प्रवेश गरे । पार्टी प्रवेश गरेर लेबी तिरे पनि उनले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद नै दाबी गरे ।”
“पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार गिराउन भने उनले निर्णायक भूमिका खेले । पहिला गुरुङकै सरकार जोगाइदिएबापत उनलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले खेलकुदमन्त्री बनाएका थिए । सांसद बनाइदिएको गुन तिर्न पृथ्वीसुब्बाको पक्षमा उभिएको उनले बताएका थिए तर विश्वासको मत दिन उपस्थित भएनन् । कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेले । मुख्यमन्त्री नेपालीले पनि उनलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्रीकै जिम्मेवारी दिए ।”
“अब मनाङमा मन्त्री राजीव गुरुङको राजनीति सकिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । गण्डकी प्रदेशका एक एमाले नेताले आगामी चुनावमा मनाङेले कुनै पार्टीबाट पनि टिकट नपाउने ठोकुवा गरे । ‘कांग्रेस पहिले नै छाडेका हुन्, एमालेले आफूलाई घात गर्नेलाई अब टिकट दिँदैन, राप्रपाको कुनै आशा छैन,’ ती नेताले भने, ‘अब मुख्यमन्त्रीले पूर्वी नवलपुरबाट चुनाव लडाउने वा बाबुराम भट्टराईले समानुपातिक उम्मेदवार बनाउने सम्भावना बाँकी छ ।’ आगामी चुनावमा उनी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा प्रवेश गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको ती नेताले बताए । मनाङेलाई कांग्रेस गठबन्धनको पक्षमा ल्याउन जसपाकी प्रदेश सांसद धनमाया लामाले भूमिका खेलेकी थिइन् ।””